Saturday June 15, 2019 - 11:00:30 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya deegaannada kala qeybiya gobollada Shabeellooyinka ayaa sheegaya in halkaas ay dhibaato ka geysteen maleeshiyaadka Mareykanku tababaray ee Bangaraafta loo yaqaan.
Xalay saqdii dhexe ayay ciidamo Mareykan iyo soomaali ah waxay weerareen deegaanka Jameeco Jilyaale ee gobolka Sh/dhexe kuna dhow halka ay iska galaan labada shabelle.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in maleeshiykaadu markii ay deegaanka soo galeen ay qafaasheen sedax qof shacab ah islamarkaana ay gubeen gaari dad shacab ah leeyihiin oo gudaha deegaanka yiillay.
Wararka ayaa intaas ku daraya in maleeshiyaadka Mareykanku tababaray ay deegaanka Jameeco Jilyaale ka geysteen dhac baahsan waxayna rarteen dhowr tukaan, diyaaradaha Drone-ka loo yaqaan ayaa xalay dul heehaabayay deegaanka balse lamasoo sheegin wax duqeymo ah oo ay geysteen.
Ciidamo Mareykan ah oo wata diyaaradaha qumaatiga ukaca ayaa badanaa maleeshiyaadka Bangaraafta ku dejiya deegaannada ay weerarada arbushaadda ah ka geystaan ee gobollada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe.
19-kii bishii June ee sanaddii 2018 ayay ciidamada Mareykanka iyo maleeshiyaadka Bangaraafta sidaan oo kale isla deegaanka Jameeco Jilyaale ugu qafaasheen arday wax kabaranaysay machad islaami ah iyagaanoa geystay xasuuq aan loo meel dayin.